အဘယ်အရာကိုအများပြည်သူတာဝန်ခံဖြစ်ပါတယ်နှင့်မည်သို့သစ်ကိုအုပ်ချုပ်မှုကိုငါ့ကိုထိခိုက်စေပါလိမ့်မယ်? | USAHello | USAHello
သင်တစ်ဦးအမေရိကန်ဗီဇာလျှောက်ထားကြသည်, ဗီဇာတစ်ခု extension ကို, အစိမ်းရောင်ကဒ်, သို့မဟုတ်အဆင့်အတန်းအပြောင်းအလဲ? ဤစာမျက်နှာကိုသငျသညျသစ်ကိုအများပြည်သူတာဝန်ခံအုပ်ချုပ်မှုကိုနားလည်ကူညီပေးပါမည်. ဒါဟာပြောင်းလဲသွားပြီသင်သည်အဘယ်သို့ပြောလိမ့်မည်ဟုနှင့်မည်သို့ကြောင့်ပြောင်းလဲမှုကိုသငျသညျကိုထိခိုက်စေခြင်းငှါ. This page was updated on December 12, 2019.
ပြည်သူ့တာဝန်ခံ update ကိုအောက်တိုဘာလ 11, 2019: အောက်တိုဘာလတွင် 11, အမေရိကန်ဖက်ဒရယ်တရားသူကြီးအသစ်က "အများပြည်သူတာဝန်ခံ" စည်းမျဉ်းကိုရပ်တန့်ရန်ဆုံးဖြတ်.
အဆိုပါ U.S ၏တရားသူကြီးဂျော့ခ်ျ Daniels. နယူးယောက်၏တောင်ပိုင်းခရိုင်များအတွက်ခရိုင်တရားရုံးသို့အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်ကောင်းဒီသစ်ကိုအုပ်စိုးမှုဖြစ်စေခြင်းငှါအခွင့်အာဏာရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါကပြောပါတယ်. အဆိုပါတရားသူကြီးအုပ်ချုပ်ရေးကိုရှင်းပြမပြုခဲ့ကြောင်းရေးသားခဲ့သည် “အဘယ်ကြောင့်သူတို့ကလူထုတာဝန်ခံချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ပြောင်းလဲလျက်ရှိသည်, အခုအသစ်ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ယခုလိုအပ်အဘယ်ကြောင့်, U.S ၏သမိုင်းအတွက်လုံးဝထောက်ခံမှုရှိပါတယ်ရာ - သို့မဟုတ်အဘယ်ကြောင့်အဓိပ္ပါယ်စိုးမိုးရေးအတွက်ထွက်မသတ်မှတ်. လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒ - ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဖြစ်တယ် "။
ဤနည်းဥပဒေအောက်တိုဘာလအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုသို့သွားလိမ့်မည်မဟုတ်ပေအများပြည်သူတာဝန်ခံကိုဆိုလိုသည် 15. ပိုမိုသိရှိလိုပါကသို့မဟုတ်သတင်းလည်းမရှိသည့်အခါကျနော်တို့ဒီစာမျက်နှာကို update ပါလိမ့်မယ်.
IMPORTANT NOTE: Even though the public charge rule has been stopped, you will still need to meet some requirements to come to the USA or to change your status in the USA. You may need to show you can cover your health expenses and other expenses. သင်ဖတ်လို့ရပါတယ် advice from CLINIကို C about how these requirements affect your application.
သြဂုတ်လတွင် 12, 2019, အမိမြေလုံခြုံရေးဌာနကသစ်တစ်ခုအုပ်ချုပ်မှုကိုအောင်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်. အဆိုပါစည်းမျဉ်းခဲ့သည် သြဂုတ်လအပေါ်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ 14 နှင့်အောက်တိုဘာလ 15 ရက်နေ့တွင်ဥပဒဖြစ်လာမှုကြောင့်ခဲ့.
USA တွင်လူအတော်များများ၏အခြေခံလိုအပ်ချက်များအတွက်အစိုးရဆီကအကူအညီရ. ပြည်သူ့တာဝန်ခံအစိုးရအကူအညီနဲ့လက်ခံရရှိသူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအတွက်အသုံးပြုသောအသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်, တစ်ခါတစ်ရံသမုတ်သော “အများပြည်သူအကျိုးခံစားခွင့်။”
ပြည်သူ့အကျိုးခံစားခွင့် ပိုက်ဆံနှင့်အမေရိကန်အခွန်အခများကို အသုံးပြု. များအတွက်ပေးဆောင်ကြောင်းသည်အခြားအကူအညီများမှာ, သို့မဟုတ်ပြည်သူ့ပိုက်ဆံ. ဤရွေ့ကားအကျိုးကျေးဇူးများကိုပုံစံအမျိုးမျိုးယူနိုင်ပါသည်. တစ်ဦးကအများပြည်သူအကျိုးအတွက်ဝင်ငွေနည်းမိသားစုများအတွက်ငွေသားဆိုလိုနိုင်ပါတယ်. ဒါပေမယ့်လည်းငွေသားမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုအကျိုးကျေးဇူးများကိုဆိုလိုနိုင်ပါတယ်. ပြည်သူ့အကျိုးခံစားခွင့် SNAP ပါဝင်သည် (အစားအစာတံဆိပ်ခေါင်းများ), အိမ်ရာဘောက်ချာများသို့မဟုတ်အခြားအိမ်ရာအကူအညီ, နှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအစိုးရကပေးချေ, ထိုကဲ့သို့သော Medicaid ကိုအဖြစ်. သူတို့ကရေရှည်စောင့်ရှောက်မှုကိုဖုံးလွှမ်းစေခြင်းငှါ, ဥပမာတစ်အိမ်မှာပိတ်ထားသည်သို့မဟုတ်သက်ကြီးရွယ်အိုလူများအတွက်.
အဘယ်အရာကိုမ “ပြည်သူ့တာဝန်ခံ Grounds သို့အပေါ် Inadmissibility” ဆိုလို?
Inadmissibility ခွင့်မပြုအဓိပ္ပာယ်. Grounds သို့ တစ်ခုခုအကြောင်းပြချက်များမှာ. ဒါကြောင့် "ပြည်သူ့တာဝန်ခံ Grounds သို့အပေါ် Inadmissibility" သူသို့မဟုတ်သူမအများပြည်သူအကျိုးခံစားခွင့်အပေါ်အားကိုးလိမ့်မယ်ယုံကြည်ဖို့အကြောင်းပြချက်ရှိလျှင်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကို USA မှလာရန်ခွင့်ပြုမပြုစေခြင်းငှါအဓိပ်ပာယျ. ဒါဟာအစထားပြီး USA တွင်လူပေါင်း status ကိုတစ်ပြောင်းလဲမှုငြင်းပယ်စေခြင်းငှါဆိုလိုတယ်, အစိမ်းရောင်ကဒ်, သို့မဟုတ်မိမိတို့၏ဗီဇာတစ်ခု extension ကိုသူတို့လက်ခံရရှိသို့မဟုတ်အများပြည်သူအကျိုးခံစားခွင့်ရရှိထားသို့မဟုတ်အရာရှိတွေကသူတို့အနာဂတ်အတွက်သူတို့ကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်ထင်လျှင်.
ယခင်တုန်းက, "အများပြည်သူတာဝန်ခံ inadmissibility" ငွေသားအကျိုးခံစားခွင့်အပေါ်အခြေခံခဲ့ပါတယ်. ယခု, inadmissibility Non-ငွေသားအများပြည်သူအကျိုးခံစားခွင့်အပေါ်အခြေခံပါလိမ့်မည်, လွန်း, ထိုကဲ့သို့သောအစားအစာတံဆိပ်ခေါင်းများနှင့်အထက်စာရင်းနဲ့အခြားအကျိုးခံစားခွင့်အဖြစ်.
အချို့ကအများပြည်သူအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည် မဟုတ် အသစ်ကစည်းမျဉ်းတွင်ထည့်သွင်းခံရ: ဥပမာ, ကျောင်းကနေ့လည်စာ, သားသမီးရဲ့ကျန်းမာရေးအာမခံ, Headstart, အရေးပေါ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ဘေးအန္တရာယ်ကယ်ဆယ်ရေးအလိုတော် မဟုတ် ပါဝင်. သင်ဤအတွက်အသေးစိတ်ဖတ်ရှုနိုင်သည် ဆေးခန်းကနေအကျဉ်းချုပ်. သင်တို့သည်လည်းဖတ်နိုင်သည် ယင်းနှင့် ပတ်သက်. USCIS မှသတင်းအချက်အလက် စသောအပြောင်းအလဲအသစ်များကို.
အများပြည်သူအကျိုးခံစားခွင့်အချို့သည်ငွေပမာဏကိုခွင့်ပြုခဲ့ကြသည်. သင်တို့မူကားထက်ပိုပြီးမခံမယူနိုင်ပါတယ် 12 36 လကြာကာလအတွင်းလအတွင်းစုစုပေါင်းအကြိုးခံစားခှငျ့. တစ်ခုချင်းစီကိုအကြိုးသီးခြားစီရေတွက်. ဒါကြောင့်သင်ကတူညီတဲ့လအတွက်ငှားရမ်းအကူအညီအဖြစ်အစားအစာတံဆိပ်ခေါင်းများခံလျှင်, ကြောင်းအကြိုးကြေးဇူးမြား၏နှစ်လအဖြစ်ရေတွက်.
အခြားဘယ်အရာကိုတစ်စုံတစ်ဦးကသို့မဟုတ်အများပြည်သူတာဝန်ခံဖြစ်လိမ့်မည်ရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်. ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်သက်ရောက်မှု?
DHS အရာရှိများဆုံးဖြတ်အခြားအချက်အလက်များမှာကြည့်နိုင်ပါတယ် (တစ်ဦးပြဌာန်းခွင့်ပါစေ) သင့်ရဲ့အမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး. အရာရှိများသည်သင်၏ကျန်းမာရေးနှင့်အသက်အရွယ်စဉ်းစားမည်. သူတို့ကအစသင့်ရဲ့ပညာရေးနှင့်ဝင်ငွေကိုကြည့်. သငျသညျပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးအာမခံရှိပါက, သင်၏မျက်နှာသာအတွက်ရေတွက်ပါလိမ့်မယ်. သငျသညျအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ကြပါလျှင်, သင်တို့ကိုဆန့်ကျင်ရေတွက်ပါလိမ့်မယ်.
တစ်ဘို့ဖြည့်စွက်လျှောက်ထား အဆင့်အတန်းအပြောင်းအလဲ Self-ဖူလုံရေးတစ်ကြေငြာစေဟုမေးပါလိမ့်မည် (Form ကိုငါ-944). ဤပုံစံလျှောက်ထားအများပြည်သူအကျိုးခံစားခွင့်မရှိဘဲကိုယ်တော်တိုင်သို့မဟုတ်သူ့ကိုယ်သူထောကျပံ့နိုငျပြောပါတယ်.
အသစ်အုပ်ချုပ်မှုကိုယူအက်စ်အေလာရန်လျှောက်ထားခြင်းနေသော Non-အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေသက်ဆိုင်. ဒါဟာအစကသူတို့အဆင့်အတန်းကိုပြောင်းလဲသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏နေထိုင်တိုးချဲ့ဖို့လျှောက်ထားသူကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိပြီးသားလူတွေလည်းပါဝင်သည်. သင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးရဲ့တခြားအကျိုးခံစားခွင့်အပေါ်စာရင်းဝင်နေလျှင်သင်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်, ပင်သငျသညျကိုတိုက်ရိုက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကြိုးခံစားခှငျ့ရတဲ့ကြသည်မဟုတ်.
အဘယ်သူသည်စိုးမိုးရေးမ မဟုတ် လျှောက်ထား?
အဆိုပါစည်းမျဉ်းကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားများသို့မဟုတ်တရားဝင်အမြဲတမ်းနေထိုင်သူများလျှောက်ထားပါဘူး (အစိမ်းရောင်ကဒ်ကိုင်ဆောင်သူ). ဒါဟာဒုက္ခသည်တွေလျှောက်ထားပါဘူး, asylees မှ, အထူးလူဝင်မှုဗီဇာနဲ့အာဖဂန်နှင့်အီရတ်.
သင်၏လျှောက်လွှာကိုအောက်တိုဘာလမတိုင်မီ USCIS အားဖြင့်လက်ခံရရှိပါကအဆိုပါစည်းမျဉ်းလျှောက်ထားပါဘူး 15, 2019.
အဘယ်ကြောင့် Rockefeller ဒုက္ခသည်များနှင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူကြိုဆိုပါတယ်